Home News Qarixii ka dhacay Itoobiya hal saac gudahooda ayuu ku dhaleceeyay kii Muqadishana...
Qarixii ka dhacay Itoobiya hal saac gudahooda ayuu ku dhaleceeyay kii Muqadishana kama hadlin? Max ka khaldan Madaxweyne Farmaajo?
Markii qaraxa ka dhacay Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Madaxweyne Farmaajo mudo laba saac gudahood ah ayuu dhaleeceeyay tacsina ka bixiyay, laakiin weerarkii kooxda argagaxisada Al Shabaab ku qaadeen wasaaradda Arimaha Gudaha oo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof oo Soomaali ah kama uusan hadlin, tacsina uma dirin dadkii ku dhintay. Mudo ka badan 24 saac ayuu ka amuusay dhibkii dhacay? Su’aashu waxa ay tahay maxaa ka khaldan MD Farmaajo? Meeday wadaniyadii uu ka hadlayay?
Dhinaca kale wax uu safar u aaday dal inta tiisa qabsaday u dabaaldagaya wanaagga hogaamiye ay aad ugu kalsoon yihiin. Sow ceebi ma karto inuu tago meeshaas oo kale, isagoon wax wanaag ah aan dalkiisa u keenin. Waxaa weerar Xun lagu qaaday xaruumaha wasaaradaha Amniga, tan Arrimaha Gudaha Iyo Taliska ciidanka boliska degdegga ah, iyadoo raggii gaystayna ay soo badbaadiyeen ciidankii xasilinta oo walba laga shaki qabo inay u fududeysay. Haddaba madaxweyna dhibaatada ka dhacda shacbiga Somaliyeed kama damqado, tii Adis oo dawlad hawsheeda taqaanna ay fashilisay, islamrakaana gacanta ku qabtay waxaa uu u diray tacsi halhaleel ah oo iska ooysiinayo, hasa yeeshee kuwa hoostiisa lagu laayey dayuurad ayuu ka raacay. Waxan oo dhan waxay muujinayaan in hoggaanka dalka si dhakhsa ah loo badaala in loo baahan yahay.
Previous articleGanacsatadii Reer Baydhabo oo diiday in ay Canshuur Bixiyaan?
Next articleR/Wasaaraha oo ku Xanaaqay Sarreeyeyaasha (Generals) Ciidanka.
Ciidamada Maamulka Galmudug iyo Koox hubeysan oo dagaal xoog leh uu...